MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 876
>Singaporeans arrested for protest in support of Burmese Activists from choonhiong on Vimeo. No tags for this post. Related...
>Biography of Mann Win Maung, Burmese President of Burma in 1957 – 3
> မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပ္ပတ္တိ – အပိုင်း ၃မှတ်စုမှတ်တမ်းဇန်န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၀၉ ကောလိပ်မှာနေစဉ်၁၉၃၃ ခု၊ ဧပြီလမှာ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲအောင်စာရင်း ထွက်လာပါတယ်။ ပါပါ အောင်ပါတယ်။ ပါပါ့ သူငယ်ချင်း ဦးဝီ(လ)ဆင်သိန်းလည်း အောင်ပါတယ်။...
>Tin Maung oO’s second step in Thailand
> တင်မောင်ဦး၏ သတ္တမမြောက် တကိုယ်တော်ပြပွဲ ဓာတ်ပုံသတင်းဇန်န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၉ ပန်းချီဆရာ တင်မောင်ဦး၏ ၇ ကြိမ်မြောက် တကိုယ်တော် ပန်းချီပြပွဲကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ သုဝဏ္ဏဘူမိ အနုပညာ ခန်းမ တွင်...
>Poet Ant Maung honored Dagon Taryar on 61st Burma Independence
> Poet Ant Maung honored Dagon Taryar on 61st Burma Independence January 10th, 2009 He recited old classic poem...
>Pe Thit Ti cartoon 02
> Performance အနုပညာကို ခံစားမှု ကာတွန်းဖေသစ်တည်ဇန်န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၀၉ ကြယ်တပွင့်ကို နမ်းခြင်း No tags for this...
>Burmese in Singapore tour Buddhist Monastaries in New Year
> စင်္ကာပူက ဘုန်းတော်ကြီးများနဲ့ မြန်မာမိသားစုတို့ နှစ်သစ်ကူး ဘုရားဖူး ခရီးစဉ် မြင်ကွင်း မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း ဇန်န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီ ၁၊ နှစ်သစ်ကူးနေ့က စင်္ကာပူမှာ ၁ သုးံးလုံး...
> ၀ါရှင်တန်ဒီစီက ၆၁ နှစ်မြောက် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ပွဲ အနုပညာရှင်ကြီးများနှင့် ကျင်းပခဲ့သည့် မြင်ကွင်း မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း ဇန်န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၉ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ၊ မေရီလင်း၊ ဗာဂျီးနီးယားဒေသရောက် မြန်မာအမျိုးသားများ စုစည်းကျင်းပတဲ့ ၆၁...
>9th Jan 2009 – MoeMaKa Wednesday Weekly Radio
> ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ၝရီ ၉ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် အမေရိကန် သန်းခေါင်စာရင်းအတွက် မြန်မာများ အစည်းအဝေး၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား ကရင်နှစ်သစ်ကူး အခမ်းအနား၊ တိုကျိုမြို့က ဦးသန့် နှင့်...
> Windows7beta (၀င်းဒိုးစ် ဆဲဗင်း အစမ်းဗားရှင်း) လာပြီ၊ မြန်မြန်သွားယူတင့်လွင်ဇန်န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၀၉ ၀င်းဒိုးစ် ဗစ်စတာ ထွက်ရှိတာမှ ၂ နှစ် သာသာပဲ ရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်...
> ပင်လယ်ဖြတ်၍ အလုပ်ရှာဖွေသူများဓာတ်ပုံသတင်း ဇန်န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၀၉လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆာဘားကျွန်းတွင် လှေတစီး သောင်တင်ခဲ့ရာ လှေပေါ်တွင် မြန်မာ နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှ စုစုပေါင်း အမျိုးသား...
>Biography of Mann Win Maung, Burmese President of Burma in 1957 – 2
> မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပ္ပတ္တိ – အပိုင်း ၂ မှတ်စုမှတ်တမ်း ဇန်န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၀၉ ပါပါ့အဖေ ဆုံးပြီးနောက် ဘဝလမ်း ခရီးဟူသည်မှာ ပန်းခင်းထားသောလမ်းချည်း မဟုတ်ပါ။ ဆူးညှောင့်ခလုတ်နှင့် ပြည့်ဝသော လမ်းလည်း...
>Picasa by Tint Lwin
> ပီကာဆာဝက် (Picasaweb) ကိုသုံးရအောင် တင့်လွင် ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၀၉ ဂူးဂဲလ်ရဲ့ ဂျီမေးလ်(Gmail)ကိုတော့ ကြော်ငြာစရာ မလိုလောက်အောင် လူတိုင်းသိရှိပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း သုံးစွဲနေကြပါပြီ။ ဂျီမေးလ် ဘယ်လောက် တွင်ကျယ်သလဲဆို လူတယောက်မှာ...
>Mar Mar Aye – Unity
> အရှိချင်းပေါင်း မာမာအေး ဇန်န၀ါရီ ၈၊ ၂၀၀၉ နှစ်သစ်ကို ကြို ဘာလိုနေတာလဲ ရင်ထဲ ခါခါထိ တွေးမိသည်ပဲ။ အထဲနဲ့ အပြင် ဆင်မတူတာတွေရော အဆင်မတူတာတွေရော ရောနှော အသေအချာ။ ထားလိုက်စမ်းပါ။...
> ၀င်းဖေ ကာတွန်းဇန်န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No...
Page 876 of 939«1...874875876877878...939»